Baolina kitra : Korontanin’ny federasiona ny fifidianana -
AccueilSongandinaBaolina kitra : Korontanin’ny federasiona ny fifidianana
Baolina kitra : Korontanin’ny federasiona ny fifidianana
Misy ambadika politika? Tsy tanteraka ny asabotsy 3 novambra teo ny fifidianana filohan’ny federasiona malagasin’ny baolina kitra (FMF). Tany Sambava no fantatra fa tokony nanatanterahan’ny komity mpikarakara ny fifidianana eo anivon’ny federasiona izany. Noho izany, nampahafantarin’ny komity mpikarakara ireo filohana ligy tonga tany Sambava fa hahemotra anio izany fifidianana filohan’ny FMF izany.
Tsy tanteraka ny fifidianana satria dia ny federasiona ihany no nanakorontana azy tany Sambava. Voalaza mantsy fa filohana ligy miisa efatra (Amoron’i Mania, Vakinakaratra, Bongolava ary Vatovavy Fitovinany) no nanirahana mpitandro filaminana nisambotra azy teny amin’ny seranam-piaramanidina tany Sambava. Torak’izany koa no nisamborana ny filohan’ny ligin’Analamanga teto Antananarivo.
Manoloana izany indrindra, nampiaka-peo ireo filohan’ny ligy miisa 14 (firaisankinan’ny filohan’ny ligim-paritry ny baolina kitra malagasy) ary nanao fanambarana fa manameloka tanteraka ny fihetsika mamohehitra nisamborana ireo filohana ligy izy ireo. Ankoatra izay, nambara fa tokony avela manatrika soa aman-tsara sy malalaka ny fivoriambe sady fifidianana (AGE) ireo filohana ligy fa tsy hanaovana antsonjay…
Hita taratra amin’izany ny fitiavan-tsezan’ireo mpitantanana eo anivon’ny federasiona. Noforonin’izy ireo avokoa izay tokony hisamborana ireo filohana ligy. Raha ny fanazavan’ireo filohana ligy miisa 14 tamin’ny mpanao gazety omaly mantsy, fisamborana tsy misy taratasy ary tsy misy antony mazava akory no natao tamin’izy ireo. Notsindrian’izy ireo ihany koa fa ny komity mpikarakara ny fifidianana no nampahafantatra ny daty sy ora tokony hanatanterahana ny fifidianana filohan’ny federasiona saingy ny eo anivon’ny FMF kosa tsy mbola nandefa fiantsoana ary tsy mbola nanome ny toerana hanatanterahana izany fifidianana izany hatramin’ny omaly. Mazava, araka izany, fa misy ambadika politika ny fanakorontanana ny fifidianana ataon’ny federasiona ankehitriny. Marihina mantsy fa mbola anisan’ireo kandidà ho amin’izany ny filohan’ny FMF ankehitriny, Doda Andriamiasasoa. Noho izany, hita ary tsapa fa mbola te hifikitra eo amin’ny toerany ity farany ka lasa manao ny tsy fanao mihitsy.
Etsy andaniny, manahy ny amin’ny mety hilatsahan’ny sazy avy amin’ny federasiona iraisam-pirenena na Fifa ireo filohana ligy miisa 14 amin’izao toe-javamisy izao. Efa mazava anefa fa ny mpitantana ny FMF amin’izao fotoana izao no fototry ny korontana amin’ilay fifidianana.
Raha toa ka izay mantsy ny zava-misy ka milatsaka ny sazy, avy hatrany dia tsy afaka manohy ny lalany amin’ny fiatrehana ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika na Can 2019 ny ekipam-pirenena, ny Barea de Madagascar, izay sambany teo amin’ny tantaran’ny baolina kitra malagasy no nahazon’izy ireo ny tapakila hiatrehana izany. Ka raha izay no mitranga, tompon’antoka feno ny federasiona…